Hydroponics: Habka cusub ee Afrika ee beerashada mustaqbalka
"Wax soo saarka cuntadu ma noqon karto mid xilliyeed sababtoo ah gaajada ama ahan mid xilliyeed"
Samson Ogbole, aasaasaha Soilless Farm Lab Founder, Nayjeeriya
Iyadoo u eg sida khayaali saynis, hydroponics (beerasho aan carro lahayn) waxaa loogu bishaareynayaa inay tahay xalka suurtagalka ah ee dejinta, iyo xitaa de-dejinta, wax-soo-saarka dalagga dhabta ah ee Afrika oo dhan.
Iyada oo gaajada saamaysay 21% ee dadweynaha Afrika, sugnaanta cunnada ayaa ah mudnaanta koowaad iyadoo isbeddelka cimiladu uu sii wado dardargelinta xaalufka dhulka iyo kheyraadka biyaha ee Afrika iyadoo ay jirto colaad, xasillooni darro siyaasadeed, iyo baylahda bulshada.
Cunto yarida Afrika ayaa 40% kor u kacay 2020
In ka badan 250 milyan oo Afrikaan ah ayaa la aqoonsaday in cuntada ku yar tahay ka hor 2020-ka. Sannadkaas waxa la arkay kor u kac aan hore loo arag ee 40% dadka ay saamaysay cunto yarida marka loo eego sannadkii hore.
Hydroponics waxay gacan ka geysan kartaa inay horseeddo habka lagu xalliyo cunto yarida, kaasoo si la taaban karo iyo waxtar ah u xallin karto qaar ka mid ah dhibaatooyinka dhaxalka ee Afrika. Waa maxay farqiga? Nidaamkan carro ama ciid la'aanta ah kuma tiirsana kaalmada caalamiga ah ee muddada dheer. Tani waxay dad badan u arkaan fursad ay Afrikaanku ku xalin karaan arrimahooda gudaha, oo ay majaraha u qabtaan mustaqbal wanaagsan oo waara, ee cuntada iyo beeraha.
Laga soo bilaabo ereyada Giriigga ee 'hydro' (biyaha) iyo 'ponos' (shaqo), hydroponics waa habka beeritaanka cuntada iyada oo aan carro lagu darin biyaha nafaqada leh. Hadda, tani ma ahan fikrad cusub; farsamooyinka hydroponic ayaa la qaban jiray kumanaan sano, oo waxay dib u soo noqdeen waqti sax ah.
Ilaa 90% ayuu ka biyo isticmaal wanaagsan yahay marka loo bar bardhigo hababka beeraha ee caadiga ah
Beerashada hydroponic waxay ku shaqeysaa nidaam xiran kaasoo ilaa 90% ka biyo isticmaal wanaagsan hababka beeraha ee caadiga ah. Baahida carrada waa la baxshay maadaama ay xididdada dhirtu si toos ah ku jiraan biyaha nafaqada leh, xididdadooda ayaa laalaada halkii ay carro ku jiri lahaayeen. Nidaamku wuxuu sidoo kale u oggolaanayaa beeralayda inay si taxadar leh u xakameeyaan heerarka nafaqada iyo xitaa kor u qaadaan koritaanka dhirta si ay kordhiyaan qiimaha nafaqada.
Beddelkaan fudud, ee waxtarka leh ee beerashada dhaqameedku wuxuu noqonayaa mid sii kordheysa oo noqonaya tignoolajiyada wax soo saarka dalagga ee muhiimka ah, kaasoo guul ka hela xeryaha qaxootiga iyo goobaha uu biyaha ku yar yahay ee Bariga iyo Galbeedka Afrika. Tusaale ahaan, nidaamyada hydroponic ayaa horeba loogu isticmaalay in lagu soo saaro cuntada Kenya, Suudaan, iyo Zambiya, iyo cuntada xoolaha ee Chad.
Maadaama beeruhu yihiin kuwo aan carro lahayn, waxay ku habboon yihiin meelo aanad u malaynayn in aad ku beeri kartid dalagyada: sida bakhaarrada, meelaha bannaan ee magaalada, iyo saqafka sare ee guryaha; oo ku fiican meelaha ay abaar ka jirto iyo carro nafaqo la'aan ah iyadoo sidoo kale daboolaysa baahida sii kordhaysa ee magaalooyinka.
'Tiknoolajiyadu wax bay fududaysaa. Waxay awood siisaa beeraha sababtoo ah waxay kordhin doontaa wax ku oolka, wax soo saarka, iyo, dabcan, faa'iidada.' Samson Ogbole, aasaasaha Soilless Farm Lab, Nayjeeriya
Tirada dadka adduunka ayaa la filayaa inuu kordho 1.5 bilyan oo qofood 40-ka sano ee soo socda. Tani waxaa loola jeedaa in loo baahan yahay in la kordhiyo in ka badan 60% wax soo saarka cuntada adduunka oo dhan ka hor 2050.
Ku habboon inay ahaadaan beero yar ama weyn, beerashada hydroponic ayaa si guul leh loo xaqiijiyay inuu hagaajiyo ammaanka cuntada iyo nafaqada, iyo yaraynta qashinka iyadoo abuureysa 'dhaqaalo wareeg ah' oo sii waaraya - qaab dib u soo kabasho ah oo dib u isticmaala, dayactira, iyo dib u warshadeeyo halkii uu wax soo saari lahaa uun. Dhaqaalaha cuntada ee wareegtada ah waxaa loogu talagalay in si hufan loo soo saaro cuntada, lagu abuuro shaqooyin, lagu buuxiyo deegaanka, iyadoo la hubinayo in bulshada oo dhan loo helo cunto ayadoo labada dhicba loo faa'iideynaayo.
Xididdada tignoolajiyadan adkeysiga leh, la qabsan kara ayaa ku fidaya Afrika oo dhan. Horeyba looga aasaasay maamul ahaan Bariga iyo Bartamaha Afrika oo dhan, Hydroponics Africa waxay ku takhasustay cuntada hydroponic, hababka calafka xoolaha iyo waxbarashada.
Ilaa hadda, shirkaddu waxay iibisay in ka badan 365 ee aqalada lagu koriyo dhirta iyo 700 lagu soo saaro calafka xoolaha ah, taas oo gacan ka gaysatay badbaadinta 500 milyan oo litir oo biyo ah iyo waxay soo saartay 6,000 oo tan oo dalagga beeraha ah. Hydroponics Africa waxa ay sidoo kale in ka badan 20,000 oo qof ku tababartay farsamooyinka beeralayda ee hydroponic.
Koonfur Afrika ayaa ah hoyga aan rasmiga ahayn ee beeraha baddalka ah ee Afrika. Shirkadaha sida Green Terrace, beer nooca hydroponic oo uu haween leeyahay ayaa aqalada dhirta lagu koriyo ka soo saarto basbaaska macaanka, kuwaaso lagu iibiyo dukaamada, suuqyada, iyo la dhoofiyo, waxayna dejinayaan heer cusub.
Sannadaha soo socda, dalagyada hydroponic ayaa laga yaabaa inay soo bandhigaan xal si waara ee cunto si sax ah loo beero, kuwaasoo kordhin doonaa u adkeysiga Afrika caqabadaha isbeddelka cimilada iyo cunto yarida.
Habka hydroponics, sugnaanta cuntada iyo dhibaatada gaajada ee Afrika, mustaqbalku wuxuu u muuqdaa mid ifaya.